mairie-antananarivo – Fampiofanana ireo mpianatra avy eo anivon’ny INFA
Notanterahina teo anivon’ny Boriboritany fahadimy ny 19 hatramin’ny 21 jona 2017 ny fampiofanana ireo mpianatra avy eo anivon’ny INFA (Institut National de Formation Administrative) Androhibe. Nitarika ny fiofanana Atoa RAHARIHASINA Asolo, Lefitra faharoan’ny Lehiben’ny Boriboritany.
Miompana indrindra amin’ny fampahafantarana ny andraikitry Sampandraharaha misahana ny sora – piankohonana (Etat Civil) eo anivon’ny Boriboritany ny fampiofanana. Ary indrindra fampiharana sy andrana amin’ny fandrindrana ny sora- piankohonana (Pratique et simulation en matière de Gestion de l’Etat Civil) no anjara biriky natolotry ny Kaominina ireo mpianatra.
Avy ao amin’ny Sampana « Adjoint d’administration » eo anivon’ny INFA miisa 120 ireo nofanina. Tanjona amin’ izany ny ahafahan’izy ireo miditra avy hatrany amin’ny sehatry ny asam- panjakana aorian’ny fianarany. Andraikitra maro no sahanin’ny sampandraharaha misahana ny sora- piankohonana toy ny: mahakasika ny fahaterahana, ny fanjanahana, ny fananganana, ny fanambadiana, ny fisarahana, ny fahafatesana ary ny fandovana.
Marihina fa misy ihany koa ny « Officier public » eo anivon’ny Boriboritany miara- miasa akaiky amin’ity sampandraharaha ity miandraikitra ny « acte de notoriété », ny taratasy fifampivarotana, ny « acte de Tutelle », ny « ratification », ny didi- panànana, ny fizara- panànana, ny fifanakalozam- panànana, ny fanomezana alalana ary ny « acte de donation ».
Araka ny nambaran’ Atoa RAHARIHASINA Asolo dia tombony lehibe ho an’ireo mpiasa eto anivon’ny Kaominina ny manome fampiofanana toy izao. Satria sady manampy ny fahaizana efa hanànan’izy ireo izany no ahafahany ihany koa manamafy ny fahalalana efa nanànany ary indrindra nahafahan’ireo ao anaty antokon- draharaha mifampizara fahalalàna. Sambany no nisy hetsika toy izao teo anivon’ny Boriboritany ka iriana ny hisian’ny fitohizany satria ilain’ireo mpiasam-panjakana am- perinasa ny mampita ireo zavatra efa hainy ho an’ireo taranaka aoriana.